INFRAWEEK 2021 - ukubhaliswa kuvuliwe - iGeofumadas
INFRAWEEK 2021 - ukubhalisa kuvuliwe
Julayi, 2021 Ukufundisa CAD / GIS, Microstation-Bentley
Ukubhalisa manje sekuvulelwe i-INFRAWEEK Brazil 2021, ingqungquthela ebonakalayo ye-Bentley Systems ezofaka ubudlelwano obuhle namasu nabaholi bemboni
Ingqikithi yalo nyaka izothi "Ukusetshenziswa kwamawele edijithali nezinqubo ezihlakaniphile kunamandla okusiza ukunqoba izinselelo zomhlaba we-post-COVID."
U-INFRAWEEK wazalelwa phakathi kwenselelo yokuletha okuqukethwe kwedijithali okufanelekile nsezingeni eliphezulu konjiniyela, abakhi bezakhiwo, abakhi kanye nabasebenza kwingqalasizinda ezweni lonke. Ku-2020, umcimbi uhlanganiswe ndawonye, ​​ngezihumusho ezimbili, ezingaphezu kuka-3000 ochwepheshe abamukele isimemo sokufunda nokuhlola ubuchwepheshe obusha kumaphrojekthi wabo wengqalasizinda, ngokusebenzisa ubuqili bamawele edijithali.
Uhlelo luka-2021 lwe- INFRAWEEK IBrazil Izokwenzeka ngoJuni 23 no-24, futhi ithembisa ukuthi izoba nkulu kakhulu. Ukuqala ngokubambisana kwamasu phakathi IBentley neMicrosoft, obhekele ingqungquthela yokuqala yalo mcimbi, iBentley izophinda isingathe amagama amakhulu avela emkhakheni wobunjiniyela nengqalasizinda ngokuhlangenwe nakho okuphelele kwedijithali, okuzobhekana nezihloko ezinjengamadolobha ahlakaniphile, ubuchwepheshe bamafu nokuthi ungawasebenzisa kanjani amawele e-Digital kanye nezinqubo ezihlakaniphile kungasiza ekunqobeni izinselelo zangemva kobhadane.
Abahlanganyeli bazoba namathuba ayingqayizivele okuxhumana nabongameli, abaqondisi kanye nabamele iCopel - Companhia Paranaense de Energia, iBIM Forum Brasil, ESC Engenharia, CBIC - Câmara Brasileira da Indústria da Construção, Consilience Analytics, ADAX Consultoria, Sabesp - Companhia de Saneamento do Estado kusuka eSão Paulo, kanye nochwepheshe abavela eBentley Systems ekuguqulweni kwedijithali kungqalasizinda.
Kuzoba khona kusihlwa okubili kwezethulo, futhi ama-keynoten okuvula azokwethulwa yi-Bentley ne-Microsoft, okuqinisa ubambiswano lwamasu olwandisiwe ngo-2020 ukuqhubekisela phambili ubuchwepheshe bamawele wengqalasizinda yedijithali. Ngomhla ka-23, u-Alessandra Karine noFabian Folgar bahlola ukubaluleka kobuchwepheshe obusha bamafu emhlabeni osanda kubhebhetheka. Ngomhla ka-24, uKeith Bentley, umsunguli kanye ne-CTO yeBentley Systems, uzovula lo mcimbi ngombono wokuphatha ohilelekile ngemvelo evulekile yamawele edijithali.
Ochwepheshe be-Bentley bethula izindlela ezinhle kakhulu nobuchwepheshe ukunika amandla amaphrojekthi akho engqalasizinda besebenzisa amawele edijithali wokuhlela kwedolobha, ukulethwa kwephrojekthi, amadolobha ahlakaniphile, nokuningi. Kulo nyaka ukugxila kwethu kungumsebenzisi, kanti i-INFRAWEEK Brasil 2021 izoba ngumbukiso omuhle ngokuqukethwe okungu-100% nokukhululekile.
Ukujoyina abadlali abakhulu kulo mkhakha futhi ufunde ngemikhuba emihle yezinkampani ezinkulu kumaphrojekthi wazo wengqalasizinda, bhalisa mahhala ngokuchofoza lapha futhi ube khona kwi-INFRAWEEK Brasil 2021, ngoJuni 23 no-24, ngo-14: 00 ntambama.
Thumela Previous«Langaphambilini IBentley Systems Imemezela Ukutholwa kwe-SPIDA
Post Next Isakhiwo se-Geology CourseOkulandelayo »